Liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Puntland oo la shaacinayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Puntland oo la shaacinayo
Liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Puntland oo la shaacinayo
December 31, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Sida qorshuhu uu yahay waxaa maanta oo taariikhdu ay tahay 31/12/2018 lagu wadaa in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Puntland.
Gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada Puntland ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqista xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ee shanta sano ee soo socota.
Xildhibaanada ay gudiga ku dhawaaqi doonaan ayaa caadiyan ka koobnaan doona 66 xildhibaan waxaana ay yihiin kuwa soo dooran doona gudoonka iyo xafiisyada ugu sareeya ee dowlada.
Sida ilo xog ogaal ah ay xaqiijinayaan waxaa wali jira ismaandhaaf iyo khilaaf ka taagan xubnaha qaar ee beeluhu ay u soo xuleen kamid noqoshada golaha wakiilada cusub iyadoo isimada qaar ay shirar gaar gaar ah la leeyihiin gudiga xalinta khilaafaadka si loo xaliyo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar.
Xukuumada uu wakhtigeedu gaba gabada yahay ayaa dhankeeda lagu eedeynayaa in ay faragelin ku hayso soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada iyadoona ay jiraan digniino arintan ku aadan oo ay jeedinayaan musharixiin iyo masuuliyiin horey xilal uga soo qabtay Puntland.
Si kastaba sano ka hor maanta oo kale 31 bisha 12-aad ayay ahayd markii gudigii xalinta khilaafaad iyo ansixinta golaha wakiilada ay soo saareen liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada xiligaas oo ay talada haysay xukuumadii Dr Cabdiraxmaan Sh Maxamed Maxamuud Faroole.